Tarkiitti dubartiin abbaa warraa ishee duraaniin ajjeefamuun mormii kaase - BBC News Afaan Oromoo
Tarkiitti dubartiin abbaa warraa ishee duraaniin ajjeefamuun mormii kaase
Goodayyaa suuraa Jalqaba bara kanaatti guyyaa dubartoota adunyaa irratti Istaanbulitti dubartii hiriira baateettu.
Torban dura dubartiin maqaan ishee Amiin Buluut jedhamtu biyya Tarkii keessatti abbaa warraashee duraaniitiin ajjeefamuun ishee guutummaa biyyattii keessatti mormii jabaa kaasiseera.
Dubartiin umuriin ishee ganna 38 ta'e kun wayita mucaashee waliin kaaffee tokko keessa taa'aa jirtutti ture abbaan manaa ishee duraanii dhufee aalbeedhaan waranee kan ajjeese.
Osoo lubbuun ishee keessaa hin ba'iin dura intalli ishee umuriin waggaa 10 taate morma haadhashee kana qabattee maaloo hin du'iin jechuun yeroo kadhataa jirtutti vidiiyoon agarsiisu gadhiifamee ture.
Viidiyoo miidiyaa hawwaasummaarratti gadhiifame kana hedduun ilaalanii gaddaa akka turanis ibsamaa jira. Viidiyoo sanarratti Amiin intalasheetti "du'uu hin barbaadu" jechaa turte.
Amiin kan mucaashee fudhattee gara kaaffee sana deemteefis abbaa warraashee duraanii kana waliin walbarsisuuf ture. Gareen mirga dubartootaaf quuqamu "We Will Stop Femicide" jedhamu akka jedhutti biyya Tarkii keessatti bara kana dubartoonni 245 ajjeefamaniiru.
Isaan keessaa 32 kan ta'an ammoo ji'uma darbe kana keessa kan ajjeefaman.Abbaan warraa Amiin duraanii kun mana murtiitti dhiyaatee "mucaan keenya eenyu waliin jiraachuu akka qabdu osoo dubbachaa jiruu waan ana arrabsiteef aalbee qabadhee deemee ishee waraaneera," jechuudhaan dubbateera.
Preezidant Erdohaan miinjee Meesut Oziil ta'an
Dubartoota turistoota Morookoo keessatti ajjeefamanii argaman
Erga miidhaa kana geessisee taaksii qabatee bakka sana gadi dhiisee kan dhokate yommuu ta'u, haati warraa isaa duraanii inni waraane Aadde Bulut ammoo garuu hospitaala geessee duute.
Amiin osoo lubbuun ishee hin darbiin dura "du'uu hin barbaadu" jechuun kan isheen dubbatte fayyadamuun Turkii keessatti mirgi dubartootaa akka kabajamuuf sochiin miidiyaalee hawwaasummaa gaggeeffamaa jira.
Kantiibaan magaalaa guddoo Turkii, Istaanbul, "Amiin Bulutiin kan nuti dhabne miidhaa dhiironni geessisaniinidha; mirga dubartootaafi daa'immanii kabachiisuudhaaf isin cinaa turre, gara fuula duraattis ammoo ittuma fufna," jechuudhaan fuula tiwiitera isaaniirratti barreessaniiru.
Gareen kubbaa miilaa Turkii (Beshikiitaash) hojii gara jabinaa kana callisnee bira hin dabarru. Ajjeechaan dubartootaa akka dhaabbatuuf warreen miidhaa akkasii kana qaqabsiisan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ni barbaanna," ergaa jedhu dabarsaniiru.
Gareen mirga dubartootaaf falmu 'We will stop femicide' jedhamu dubartiin bakka bu'e BBC'tti akka himanitti "Jechi ishee dhumaa 'du'uu hin barbaadu' kan jedhu yoo tahu gaaffiin ishees na in ajjeesiin kan jedhu ta'uun isaa nuti dubartoonni Turkii keessa jirru gaffiin keenya inni xiqqaan nuti qabnu du'uu dhiisuu ta'uu isaa agarsiisa jedhan.
Fujimooriin dubartoota maseensuun himataman
Mucaan Amiin umuriin ishee ganna 10 taate, "haadhakoo na jalaa hin du'iin" jechuu ishee yaadachuudhaan "namni kamiillee kan salphaatti argachuu danda'u natti hin fakkaatu" jechuun dubbatti.
Guusuum akka jettutti dubartoonni Turkii dubartii ta'uu isaaniif qofa miidhaa akka irra ga'aa jiru hubachuu jalqabaniiru. Turkoonni baay'eenis qaama sochii kanaa ta'aa dhufaniiru.
Qorannoon Yunvarsiitii Helteeppiitti hojjetame akka agarsiisutti dubartoota gaa'ela keessa jiran ykn gaa'ela keessaa ba'an dhibba keessaa 36 ta'an jireenya isaanii keessatti yoo xiqqaate si'a tokko miidhaan qaama isaaniirra ni ga'a.
Dubartoonni turistoota Iskaandineviyaa lama Morookoo keessatti ajjeefamanii argaman
18 Muddee 2018
Albertoo Fujimoorii: Dirqamaan dubartoota maseensuun himatame
Preezidantiin Tarkii, Erdohaan taphataa kubbaa miilaa Meesut Oziiliif miinjee ta'an